Umaki: Ukumaketha kwePinterest | Martech Zone
Umaki: Ukumaketha kwePinterest
Isimo Sokumakethwa Kwemidiya Yezenhlalo 2015
NgoMgqibelo, Septhemba 26, 2015 Douglas Karr
Sabelane ngemininingwane yephrofayli kanye neyezinhlobo zabantu kumanethiwekhi omphakathi athize, kepha lokho akuhlinzeki ngemininingwane eminingi mayelana nezinguquko zokuziphatha kanye nomthelela wezokuxhumana. Iselula, i-eCommerce, ukukhangisa okubonisa, ubudlelwano bomphakathi kanye nokukhangisa kwenjini yokusesha kuthintwa ukumaketha kwezokuxhumana. Iqiniso ukuthi… uma ibhizinisi lakho lingamakethisi ezinkundleni zokuxhumana, ulahlekelwa yithuba elikhulu. Empeleni, ama-33% wabakhangisi bakhombe imithombo yezokuxhumana njenge-
Umhlahlandlela Wokugcina Wama-Metrics wePinterest
NgoLwesine, Agasti 15, 2013 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Sithola umfudlana omuhle wethrafikhi kusuka ePinterest. Kuyavumelana kahle inqobo nje uma ukuthumela kwethu kuPinterest kungaguquguquki. Iphinde yasiza lapho sifaka i-Pinterest Pin It Button For Images - uzoyibona uma ulungisa isithombe ngezansi. Baningi kakhulu abanye abantu ababelana nge-infographics yethu. Ibhodi lethu le-Marketing Infographics cishe linabalandeli be-1,000 futhi ngokwethembeka senza okuncane kakhulu ngaphandle kokuthumela ama-infographics ethu lapho! I-
Lesi sihlahla sesinqumo esivela kuZoom Creates Blogs siyithuluzi elihle lokuthi amabhizinisi anqume ukuthi anazo yini izinsiza noma cha futhi kufanele atshale isikhathi namandla ekwakheni isu lePinterest. I-infographic enhle futhi iyasebenza kakhulu. Uma ibhizinisi lakho linquma ukungalakhi isu lalo lePinterest, noma kunjalo, lokho akusho ukuthi awukwazi ukubuyisela emuva kumabhodi abanye abantu! Amanye amaklayenti ethu axhasa futhi asebenze nabaqhubi bebhodi lePinterest abaphumelelayo
I-Social Media How-To Kit
NgoMsombuluko, Juni 25, 2012 NgoMsombuluko, Juni 25, 2012 UJenn Lisak Golding
Uma usesikhundleni se-ecommerce, amathuba akhona, usuvele usebenzisa imithombo yezokuxhumana ukuze wandise ukuqwashisa ngomkhiqizo wakho nokuthengisa kwakho. Ngakho-ke, uhlele ikhasi le-Facebook lenkampani yakho kusakhiwo esisha se-Timeline, futhi kungenzeka ukuthi udale ikhasi le-Pinterest ukuze ibhizinisi lakho lisebenzise ukubonwa ukuze kuzuze wena. Kepha ukuguqulwa kwakho kungahle kungabi lapho ufuna ukuthi babe khona. I-Zmags (iklayenti), umshicileli wekhathalogi yedijithali egxile ku-